Umfazi waya nomzukulwana Estonia | Apg29
Le yenye yezona ukwazi bukaThixo bukusa, njengoko endakha batyhubela.
Aftonbladet amakhadi September 28, 1994.
Namhlanje engama 25 enqanaweni Estonia waya phantsi kuLwandle lweBaltic. Inoku engqondweni, ndifuna ukwabelana ubungqina bam zala Estonia zentlekele esivela isahluko emangalisayo encwadini yam intanda Ubusuku mde.
Namhlanje ke iminyaka engama-25 ukususela Estonia yazika, kunye nabantu 852 baphulukana nobomi babo. Abantu 137 kuphela abasindayo.
Umkhweli nqanawa M / S Estonia waya ngaphantsi koLwandle iBaltic September 28, 1994 kuhambo wayo ukusuka Tallinn ukuya Stockholm.
Kwakukho abantu 989 ebhodini, ngaye 852 bafa. Kwezi, i-501 balwa. 51 Swedish wasinda. Njengoko bonke basinda abantu 137.
Estonia Intlekele le nqanawa inkulu loxolo ongunaphakade emanzini yeYurophu. Kwakhona enye ezibulewe njengoko kwenzeka ngokwabantu ngexesha 1900 emva kwexesha.
Uhambo ku Estonia
Kwincwadi ethi The ngobusuku lide Christer Åberg.
Yaba into kwafuneka ukuba kwenzeka, okanye mandithi, enye into loo nto ayizange yenzeke kwintlanganiso kakhulu Tranas endaweni. Kananjalo le yenye yezona ukwazi bukaThixo bukusa, njengoko endakha batyhubela.
Emva kokuba asindiswe, ndaye ndaya kamva kwizikolo ezibini eBhayibhileni. Kwisikolo seBhayibhile yesibini waba Jonkoping Pentecostal Church. Igama wayemfutshane, College seBhayibhile kunye Pastor Leif Svensson waba utitshala intloko yesikolo. ngokwenene Esi sikolo banawo Viebäcks kwikholeji, kwaqhubeka kangangonyaka. Oku kubaluleke ngokwenene kum.
Ekubeni waba ngokuzithemba okukhulu Leif Svensson, ndaqhubeka sinxulumene naye emva kwesikolo yaphela kum. Ndandidla ke ukumbiza ngoku uze emva koko. Ngesinye isihlandlo waxelela Leif ukuba wayesele kwelo lalisakuba yiSoviet Union washumayela ngoYesu. Abantu abaninzi bafumana uYesu sasindiselwa ezintlanganisweni, yaye oko bekuya kuba kwakuhle ngokupheleleyo.
Isithende kwentliziyo yam. Ndifuna ukuba nalo, wakhwaza oko engqondweni yam. Kodwa ke soze abe ixesha besiya eSoviet Union. Emva kokuba incoko yethu lichithakale ubukhosi omkhulu.
Xa kamva eyabizwa ngokuba Leif, wandixelela ukuba babeza kuba iphulo lamaKristu enkulu kwi yangaphambili kwibhotwe wamaKomanisi imali Latvia kaThixo, Riga. Wacela ukuba ndifuna ukuhamba, yaye nam ndandifuna, kunjalo. It kwakhona kwakuhle ngokupheleleyo: Abantu abaninzi basindiswe futhi ngamandla baphiliswe kuzo ezahlukahlukeneyo izifo sJags.
Kwakhona bekuya kamva kuba uhambo yesibini ukuya Riga. Eli xesha iintlanganiso kwiholo enkulu yemidlalo. Omabini maphulo Kwandichukumisa gqitha engqondweni yam yaye nam ndandifuna ukuba babandakanyeke ngaphezulu iziganeko ezimangalisayo hlobo kwixa elizayo.
Pentecostal Church in Ljungby eziqeshiweyo ezindlini eziliqela yaye ngoku ixesha wahlala kulo libekiwe phezulu. Yaba enye enkulu, yokugcina silingi izidanga, kunye skylights. Lanikwa igumbi elikhulu kunye nekhitshi side kakhulu kunye emthunzini nto leyo eneneni ngakumbi njenge igumbi elincinane. I oko kakuhle udliwa indlu, leyo nokuba waba balcony encinane. Xa Ndema phezu balcony, kwafuneka umbono omhle isikhululo, leyo kufutshane.
Ekhitshini enkulu lume, apho kwakufuneka ifowuni yam Ekso- ebomvu, Ndambiza imini enye ukuya Leif Svensson. (Oku phambi cordless phones kunye nexesha mobile phones '.) Xa waxelela Leif Svensson kum:
"Siza ukuba iphulo elikhulu ikomkhulu Estonia. Siya kuhamba khona inqanawa emikhulu ethwala ukusuka Stockholm. "
kwakhona isithende entliziyweni yam. I ngokwenene ndingathanda ukuhamba. Ndandisazi indlela emangalisayo bekuya kuba ndandikhe nemikhankaso ezimbini ezidlulileyo. Kodwa mna ingxaki enkulu. Lipelwe imali.
"Ngenene Ndingathanda elizayo," ndathi Leif, kancinci kulusizi kwaye resignedly. "Kodwa andikwazi imali yokuya. I nje Asinayo imali. "
Ekubeni ke ngeli xesha akasebenzi, ndandihlala phezu imida. I akanakuze balila kum into engaphezulu. Ndafumana imali kwi-inshorensi ngqesho, yaye oko kwanele kuphela eyimfuneko ubuncinane. Rhoqo emva kweeveki ezintandathu mna, ke, ngenxa yezizathu ezithile, imali encinane kakhulu. Kwaba ngenxa into countervailing, endingazange ngokwenene akwazi ukuqonda. Xa Leif waxelelwa ukuba ndandingasakwazi ukuluthenga, wathi wayekholwa enempilo
"Akukho ngxaki. Siza amalungiselelo oko. Ufumana i uhambo sitshiphu, kwaye abanye abazi nto. "
Kwaba ngenxa yezi hambo ukuba "abantu abaqhelekileyo" bakwazi ukulandela. Bona amatikiti ngokwabo, ngoko ke baba nako ukuncedisa ngeendlela ezahlukeneyo kwiintlanganiso. Ukuba phakathi kwabanye kuba nize nithandaze abantu, ngokufuthi khulu, yaye weza efuna ukuba basindiswe. Xa ezi balwa zesiqhelo wathandazela abantu abafayo, baye bephiliswa. Oku kwaba kanye ukholo-isakhiwo: Omnye waba ngamanye amagama, ukuba eneneni xa uYesu izimanga nemiqondiso: Kwakhona, Ngoku ndiyazi ukuba iklasi iBhayibhile Leif wayeza kulandela kwaye bathathe inxaxheba kweli phulo. Ngale ndlela, baba ithuba elikhethekileyo izinto abazifundileyo esikolweni eBhayibhileni. Babeya ngamehlo abo ukubona ukuba esebenza ukukholwa ku Yesu.
Leif Svensson wenza umgudu ngokwenene ukwenza intengiso elungileyo uhambo, ukuze ndikwazi ukulandela. Wandixelela ukuba bekuya kuba iphulo elungileyo nendlela emangalisayo kuba ukuba aye imeko phenyane umkhweli ubugcisa ukusuka Stockholm ukuze Tallinn. Lundwendwe kumagumbi zabo phezu enqanaweni kunye ndiyilangazelela ngoku ngakumbi nangakumbi apho. Phambi kokuba iphele incoko Leif wathembisa ukuba uza kuthumela inkcazelo malunga phulo kwaye kananjalo malunga umkhweli obutofotofo yaye side ngeposi incwadana entle. Kwiintsuku ezimbalwa emva kokuba incoko endaziva egumbini lam yokuhlala enkulu ukuba benifudula njani iphazamisane iposi emnyango yam, yaye thud sento lawela phantsi eholweni. I indulumbane yam? Ket de Umnyango ecocekileyo ukubona ukuba yaba isithuba ukuba ufikile. Ewe, apho ke phezu owuphiwe. Ndandifuna ukubona ukuba leta ulwazi malunga uhambo Estonia ufikile. Yonke enye mail iincwadi, iimagazini kunye neentengiso lo xesha hayi umdla kakhulu. Ukuze wandiyolisayo, ndafumana imvulophu enkulu omdaka kunye Leif Svensson njengoko kumthumeli.
I nangoko wazikrazula yemvulophu emdaka kunye index yam ngomnwe njengoko unobumba imela athile, banduluka idandalazisa okuqulathwe waza wafumana indawo bit amateurish ulwazi ezenziwe ngohambo Estonia ukuba Leif wathumela kum. zithathelwe Amehlo am ngokukhawuleza kakhulu kwindawo entle, esamkela incwadana malunga ezinkulu phenyane umkhweli zodidi ezaziza kuthi ukuba Estonia.
Ndifunda inqanawa enkulu kunye athi swii. Ikhadi sathathwa kwikonw ngekona ngaphezulu. Le nqanawa yaba kude apho wayehamba phezu kolwandle eblowu aludumbanga emhlophe elide emva. Kuthekani ukuba ndikwazi ukuhamba. Yintoni i adventure bekuya kuba, ngeendlela ezininzi.
Ewe, mna ngenene ndifuna ukulandela, kodwa bemilenze engqondweni yam xa ndacingisisa nje imeko yezoqoqosho mna ngokwam ezifumaneka. Yintoni na endiya kuyenza? Kaloku, mhlawumbi oko kusoloko kusetyenziswa ukuyenza xa Ndabaleka engxakini okanye ngokoswele into: Thandaza kuThixo. I wagoba ngenxa yokuba ngamadolo am yi ebhedini kwigumbi elincinane, nto leyo emthunzini lam, bathandaza kuThixo egameni likaYesu. Ndamcela ukuba andiphe imali wendlela. Xa uthandaza kuThixo ukufumana iimpendulo umthandazo - ngandlel 'ithile.
Ndaziva nesibini abadala abangamaKristu kanjalo baba ngabahlobo bam. Amagama abo ke uRute Berndt yaye Kivenkile ezaziwayo-kakuhle kumbindi Ljungby. Ngoku ke, ndandidla ukuya kuzo. Bendisoloko ndaziva bamkelekile kuzo. Zange nanini mna avume ukuza xa ndithe ekhayeni labo. Kwathi kaninzi.
Babehlala kufuphi nenqaba amanzi, nto leyo phezu kwentaba ngentla kanye embindini. Kwadlula imizuzu malunga amabini ukuhamba ukuya endlwini yabo izitena emdaka. Xa wayetyelele mna bahlobo wamema kuhlala nam ikofu kunye cookies ngoxa wayehleli esofeni emdaka amakhulu igumbi ephilileyo ezintle.
Sidla owayeza kusijongela iividiyo zamaKristu kunye. Ngeli xesha, kwadlula kusekho nenjini xa ubuya ubona iimovie pre-irekhodwa kumabonakude. URute no Kwakufika kukho ngenene bhanya abangamaKristu amaphulo ezininzi ezahlukeneyo kunye neentlanganiso ehlabathini lonke. Movie umdla kakhulu kwaye kwafuneka kunye nezithethi owaziwayo. Oku koko wavuka ngokomoya komzimba ebomini xa efika apho. Sasidla ngokuthetha ke ngoYesu, yaye malunga imeko yokomoya eSweden.
URute no Kwakufika ebezisoloko kakhulu ukuxelela kunye nendlela kakhulu. Ndaba eninzi bentliziyo, ngoko bekuya rhoqo emva kwexesha xa sidibana. Thina sonke bobathathu bakholisa ukulahlekelwa umkhondo ixesha. Ngoko akumangalisi ukuba ngokufuthi waba ngobusuku phambi kokuba ndandihamba ekhaya. Ndandisoloko zilungiselwe nobusuku elide xa ndatyelela kubo.
Omnye ngokuhlwa ixesha olunye utyelelo uRute Kwakufika. Ndandiphuma endlini yam ibandla bakwaMoya, awela kwisikhululo sikaloliwe, wawela isikwere kunye koko langutise induli elide. On top of yenduli Ndajika baqhele ukususela kwinqaba emanzini ku- kwicala street ekhokelele endlwini yabo, wenyuka amanyathelo ilitye amafutshane kwakhala intsimbi.
wavula nje emnyango kwaye ndibulisa ngokwesiqhelo wamkelekile elimisiweyo. Njengesiqhelo, ndaziva eli xesha ngokufudumeleyo ezifunyenwe ngabahlobo bam. Kwakungathi kangaka ukuba uhlale nabo. Ekubeni ndandineminyaka useyedwa ngeli xesha, eyona nto ibalulekileyo kum ukuba nabahlobo abangamaKristu entle oncokola nabo.
Sahlala, njengesiqhelo, phantsi kwigumbi ephilileyo TV isofa, encokola, wakhangela eshukumayo, sathetha, yasela ikofu, wakhangela eshukumayo, wathetha ... Ngamafutshane, oko kusoloko kusetyenziswa ukuyenza xa sadibana, kunye neeyure labhabha njengesiqhelo kude.
Ngaxa ngexesha ngokuhlwa elide, ndaqala ukuthetha luhambo, njengoko kakhulu kunene wayefuna ukuya phambili.
"Utitshala wam yangaphambili zeBhayibhile kwiSikolo Bible yowama e Jonkoping, Leif Svensson, uya kwenza iphulo elitsha kwiMpuma Yurophu", ndamxelela uRute Kwakufika.
"Kuba Latvia kwakhona?" Wabuza Berndt ngoxa basela ithamo encinane yekofu etshisa ikeyiki.
Wayenomdla nangoko kuba nomdla omkhulu vangela kwamanye amazwe, ingakumbi eMpuma Yurophu. Le vidiyo flickered kwiskrini lwabo kumabonakude, kodwa ngoku ngesiquphe namnye kuthi anomdla kuyo. I uhambo olulandelayo ezithe zaqatsela, yaye wona wabanjwa iindlebe abahlobo bam '. Babesazi ukuba bazenza ezi ndidi zeehambo kwixesha elidlulileyo kwaye babesazi indlela i uhambo ubefuna kum.
"Hayi, Tallinn e Estonia," waphendula xa umbuzo Smitty lukaThixo. "Kuya kubakho enkulu imvuselelo imizabalazo anion leyo, ngendlela efanayo njengoko amaphulo Ndakhe ndaya e Riga."
"Yintoni fun" ukhangelo olwenziwe uRute ngoxa yena Wagalela inxalenye ikofu ngakumbi indebe yam ezingenanto. "Ngaba uza kuza?" Wabuza, ephethe ngaxeshanye de ikeyiki isitya kum ukuba mna ndiza kwenza nkqu ikhekhe elisanda wathela ikofu.
"Ngenene Ndingathanda," ndathi, "kodwa kukho kuyekela encinane. I nje kuba imali yohambo, ngoko abanakukwazi ukuhamba. "
Ndandicinga ukuba akazange ngokwenene kuba xa ekhankanywe mcimbi. Esi sibini ukuba angala intabalala imali. Bayithabatha ke ivenkile ezithandwayo kunye busy e Ljungby. Kodwa sebenzisa ukuthetha ngokukhululekileyo ngayo yonke into, ngoko ngoko ngokwenene akukho engqiba kum.
Saqhubeka ukuthetha ngayo yonke into, kodwa xa intsimbi waba isiqingatha kuba ngaphambili elinambini, ndacinga phofu ukuba ixesha ukuphelisa Community yethu. Le ngxoxo yaqhubeka ixeshana emnyango wangaphambili phambi kokuba ekugqibeleni sahlukana.
Ndahamba phantsi kwentaba elide yaye njengesiqhelo waba iimbono olukhulu embindini ebumnyameni. Streetlamps, izindlu kunye neevenkile kakuhle zagcwala ebumnyameni kwindlela emva indlu yam phakathi cinema esi sixeko kunye kwisikhululo sikaloliwe.
Emva kokuba hlukana ngobo busuku wacinga Berndt koko ndandimxelele ngohambo Estonia. Xa ndifuna ukuya kwi uhambo, kodwa zange babe nethuba ngenxa yokungabikho kwemali.
"Ukuba Chris siyibona kwakhona phambi kokuba uhambo, ndiya kumnika imali," waqiqa Kwakufika ngokwakhe.
Ezi ngcinga endandiyazi nto ke ngayo. Kwakufika wandixelela kakhulu kamva ukuba uza kundinika imali kuyimfuneko, ukuba ndibuye phambi uhambo. Into engaqhelekanga yayikukuba andizange.
Le yinxalenye encinane angaphezu kwendalo nokhokelo kaThixo ocacileyo. I ucele imali yohambo, kodwa kwakhona ndacela ukuba ibe ngumfazi. UThixo usebenza ngoku ukuze kungekudala uza kuba nethuba ukufumana iimpendulo umthandazo.
Ngeli xesha Ndaxelelwa ukuba abangasebenziyo. Rhoqo emva kweeveki ezintandathu, ndandidla ukufumana imali engaphezulu kwi-inshorensi ngqesho, kwaye ngoku ke ixesha kwakhona. Oku ndandisele ndilibele ngokupheleleyo, kodwa xa ndihleli nomntu index wam umnwe noqhoqhoqho ukuvula i mvulophu esuka inshorensi ngqesho, ndabona ukuba bamfake imali eyongezelelweyo eli xesha. Ngesiquphe Mna ngokwam imali yokuya Estonia.
Kodwa kukho into eyenzekayo engqondweni yam. Inzala kokuhamba ku Estonia engasekho khona. It unyamalale ngandlel 'ngoxa Ndalinda. Kwathi cwaka kakhulu entliziyweni yam ngenxa phulo ecwangcisiweyo e Tallinn. Mna ngenene akukho umnqweno kwakhona ukuba aye Estonia.
Ndaxelela umhlobo wam Tomas, owandithabathayo ukuya kwicawa Yomoya kwaye sele iphumelele ndim, mna ngoku imali engaphezulu kwi-akhawunti. Wayeyazi indlela Ndandifuna ukuya Estonia, kodwa ukuba uqoqosho ubeke wathetha kwevili.
"Ngoko ke oko kukuthanda kukaThixo ukuba uhambe!" Yena wathi ngokuzenzekelayo xa ndimxelela iindaba yemali. Andisoze ndiyilibale impendulo yam xa zabaluma grimly, kodwa ngokuqiniseka okukhulu wathi:
Andizange ngokwenene bayakwazi oko ndakuthethayo. Kwathi nje ngandlel 'uphume emlonyeni wam komlomo wam. Apha ndandichithe nzima yaye wacela ukuba bavunyelwe ukuba baye Estonia. Xa ndade ithuba, ndathi ukuba na ukuthanda kukaThixo.
Ngoku koko ndiyaqonda ukuba ngokwenene mna owathethileyo. Yaba uMoya lowo watshoyo ngam. Ukuze ukuba sivumele "yokomoya" okanye nekratshi, mna toned phantsi, nangona kunjalo, kancinane ngokudibanisa:
"Andiyithandi loo nto."
Ndandicinga ukuba yavakala ngcono kunokuba cocksure njalo. Kodwa emva kokuba ingxelo ukuba umcimbi yaxoxwa ekupheleni. Thomas akazange up nto kakhulu - kwaye musa noba. Kukho into eyenzekayo engqondweni yam malunga nephulo e Tallinn. Umnqweno wam yasha ngokupheleleyo kude yaye ndandingakwazi ngokwenene ukuqonda oko.
Ngasuka ndawo ngelo xesha, yaye ndinombulelo ngonaphakade. Emva koko, ndiyaqonda ukuba uThixo ngaloo ndlela ondikhokeleyo ngendlela engummangaliso.
Elinye ibhinqa eliselula Linkoping, kwiinyanga abancinane kunam embalwa kuphela, ndacinga ukuba ukuhamba phezu uhambo olufanayo. Lo mfazi, ngokungafaniyo kum, wayekhulele kwintsapho yamaKristu. Waye ke wasindiswa yaye sele bakwazi ukusebenza njengoko womshumayeli weendaba endaweni kukuliphi. Kwiminyaka embalwa ngaphambilana wadibana uYesu sokuhlaziya kwaye ngoku waphila ubomi owabelwe kuThixo.
Abanye abahlobo bakhe ixesha elide wazama ukuphembelela ukuba ahambe nathi kolu hambo emangalisayo kunye entsha njengoko bekuya kuthetha ukuba kuza ku Estonia. Kodwa akazange azi ngokuqinisekileyo ukuba uza kuyenza. Ngaba alandele okanye akunjalo? Yena ngokwenene ezingqondweni ezimbini babe sekhaya kwigumbi labo enamagumbi amabini e Linkoping.
Etafileni apha ekhitshini yakhe zokuba yaba sheets eyiyo enye ekhaya uhambo kunye nam. Waye ke incwadana enemifanekiso ethi emnandi le nqanawa umkhweli eqaqambileyo, eyabonisa inqanawa ebalaseleyo elwandle eblowu Emva emhlophe ngasemva.
Apho, xa ekwindlu yakhe, waba abambene kokubini kunye nokucela noThixo. Njani akwazi ukuyenza?
Kungekudala emva koko, ndandikhe phantsi kweli ziko kwaye wenze ityala. Endleleni egodukayo ngaloo ngokuhlwa, ndikhumbula kakuhle kunjalo, mna bagqitha isitendi wahamba. Ingakumbi omunye sematheni waba ning'ong'oza evela kwabanye, ndicinga ukuba phakathi ezintathu. I krwaqu kancane engaba ngayo xa kwakudlula kwivenkilana. Sematheni, kwaba kunye ngoonobumba abakhulu black: "Ferry yazika iBaltic ebusuku - phezu 800 abafileyo"
Nangona löpsedeln embi eyothusayo, ngoko ke wathi ke ngokulambisa. Mhlawumbi ngenxa yokuba ndandicinga ukuba abadani wandichukumisa, kwaye isoloko kwenzeka kwenye indawo kwaye hayi "apha". Ukongeza, ndandicinga ingcamango ephosakeleyo, ukuba akuyi kuchaphazela thina eSweden, kodwa abanye abantu kunye namazwe. Kuvame kangakanani ukuba abantu yaye mna andibanga bit eyahlukileyo elo xesha. Xa iingozi kunye neentlekele yenzeke, oko kusoloko omnye umntu ehlabathini. It alwenzeki eSweden kwaye ngaphantsi bakhathazekile mna kuyo. ingcinga Strange, kodwa ngelishwa njalo.
Ngentsasa elandelayo, mna ndahlala ngokuzolileyo yaye badla kwasekuseni lokuphekela yam wayifaka okuziinkozo yam kunye nesonka kunye salami ngoxa absentmindedly ndaphulaphula kwibhulethini iindaba kwirediyo.
Newscaster ngokuncokola intlekele enkulu kuLwandle lweBaltic. Ngesiquphe Ndikhumbule löpsedeln ndibona ngobusuku ngaphambili. Iphenyane ukuba zitshone, yaye abantu abangaphezu kwama-800. Ndaqalisa ukuphulaphula ngenyameko ngakumbi. Le ntatheli yathi phenyane wayesele ngendlela yayo ukusuka Estonia eSweden ezinzulwini zobusuku babeye phantsi njengamaza olwandle.
Estonia? Kodwa oko ku Estonia, Ndinge Ihambe uhambo lwam? Kwaye kulapho Leif Svensson babehamba nokuba kwiphulo lakhe. Kwakhona Wahlela ukuba inkampani enkulu eyayiza kuba. Ngaphezu koko, phantse yonke iklasi kwisikolo seBhayibhile ukuze babe naye.
iingcinga zam waphazamiseka kwakhona xa Newscaster waphinda igama wokuweza, ukuba lwehla kumgangatho kolwandle, "igama wokuweza yi Estonia".
Ngequbuliso zigxile ngokupheleleyo wacinga Indothusile: Estonia? Hayi ukuba isikhephe enkulu wabizwayo loo ezaziza kuthi ukuba Estonia?
Ndayeka ukuhlafuna kum kukubola, wabeka phantsi amacephe. Sandwich nge sausage wamachaphaza makhe kum, nam ndibe bendigobele phambili endaweni ngokukhangela kwi imfumba kwiphephandaba. Phakathi amaphephandaba kunye reklarnblad Ndakhangela ukuba le ncwadana inemifanekiso ukuze ngokukhawuleza ukuze ukwazi igama enqanaweni.
Zange kube kudala ngaphambi kokuba ndiyifumene. Hayi ngaphandle koloyiko Ndajonga umfanekiso inqanawa giant ukuba babehamba ngokuzingca phezu ulwandle ugwebu amaza ngasemva. Amehlo am bamfuna ngolangazelelo igama sikhephe, eyabhalwa ngoonobumba ecacileyo ezimnyama kwi phenyane omkhulu. Inqanawa kwi bar mfanekiso ngokwenene ogama Estonia.
Ndajonga le ncwadana umfanekiso omhle. Iindaba ndeva nkqu nangaphezulu ilizwi. Inye kuphela eyayikho ngoku engqondweni yam igama enqanaweni: Estonia. I ukuyifunda ngokuphindaphindiweyo. sekratshi lizwe elincinane lweBaltic i-M / S Estonia ukuba zitshone ukuya ezantsi. umhlobo wam Leif Svensson kunye nenkampani yakhe yonke mhlawumbi phezu ebhodini. Kwaye Bendinga nam ndingakhe ziye inxaxheba.
Xa ndabona ukuba ngokwenene Estonia abathe bawa, toted phezulu imibuzo entlokweni yakho. Ndahlala ithuba elide etafileni zamakhitshi bebambe the kancinane amateurish intengiso incwadana ngeli phulo kunye ncwadana kakhulu ngakumbi professional Estonia, ngoku kuyabonakala ukuba elele kwiBaltic olwandle. Phantse yenzeka kwaye norhatyazo kancinane, ndabona iincwadana ezimbini ndizama ukubeka kunye umfanekiso woko kwenzekayo. iingcinga zam baya Leif Svensson. Ngesiquphe Wandibetha ukuba ndifanele ndingabizi umfazi wakhe, uSara. She akavuma ukuya kwi uhambo eli xesha, njengoko maxa wambi wenza. Waye, phakathi kwezinye izinto, kulandele eRiga kwi uhambo olufanayo I ngesinye isihlandlo. Kodwa ke eli xesha, wayesele Ukhethe ukuhlala ekhaya. I wamvusa ifowuni yam Ekso- elibomvu wafowunela inombolo 036 ukuya Jonkoping.
Kuphela nje Imiqondiso ezimbalwa ingaba kwenzeka ngaphambi kokuba waphendula. Mhlawumbi uSara wahlala wabukela ifowuni ngaloo mini, ngenxa yokuba mhlawumbi abaninzi ekuthiwa wayefuna ukuva oko kwenzekileyo. Leif waba abahlobo abaninzi yaye esazi ke nabo abantu abaninzi ngenxa umsebenzi wabo. Inene, kukho kwakhona iintsapho ezininzi abafundi ababefuna ukuba bafune inkcazelo engakumbi malunga babo ababathandayo. USara waqinisekisa ukuba Estonia inqanawa Leif yonke iqela wayelapha. Ngoko wathi isigwebo eya kuze ndiyilibale:
"Mna ke ube nethemba kakhulu ..."
Waye ke ngoko akukho themba lokuba Leif ukuba iqhube. Yaye akazange. Yena kunye namanye umfundisi, ULennart Carlsson, kunye enkulu odidi yeBhayibhile, abanye iqela, kunye amakhulu abanye babulawa ngobo busuku ezinzulwini zolwandle xa Estonia yazika kwimizuzu elishumi elinesihlanu.
Ndiye ndacinga ngesi siganeko ngaphezu kanye. Bendiya ukuba ebhodini Estonia. Kunokuba uyalandela uhambo oluya Estonia, ndakhetha ukuba ndihlale ekhaya, ngokuba mna "va" yona.
Loo ntokazi Linkoping, ngasendleleni, ogama Marie, wagqiba ngenxa yesizathu esithile ukuya kumaSirayeli kunokuba ku Estonia - nakuba ekuqaleni wagqiba ukuba bajoyine uhambo iphulo Leif Svensson kaThixo.
Xa kamva ndafumanisa ukuba ndaqonda ngakumbi indlela emangalisayo uThixo wabakhokelela naye kunye nam.
Kwincwadi ethi The ngobusuku lide Christer Åberg epapashwe ngabavakalisi Semnos . Isahluko 2: Journey kunye Estonia. Iphepha 25-36.